Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nonkala kanonkala | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngesilwanyana esinakho ukuthatha ikhaya laso ngokoqobo naphina apho lifuna khona. Imalunga nayo unonkala. Nangona ngoononkala, zinxulumene kakhulu neekreyifishi kunezohlobo lwazo. Abanalo iqokobhe elilukhuni njengabanye, kodwa banalo iqokobhe elisebenza ukukhusela imizimba yabo. Into enomdla ngesi silwanyana kukuba, njengoko ikhula, ithatha iqokobhe elingenanto leenkumba zolwandle ukuzikhusela. Ubomi bakhe buquka ukukhangela izindlu ezintle ngakumbi njengoko ekhula kwaye zincinci kuye.
Kweli nqaku siza kukuxelela indlela ehlala ngayo unonkala odla ubomi kunye neempawu zayo.
3 Ukutya kwenkalaka yeHermit kunye nendawo yokuhlala
4 Ukuzaliswa kononkala lweHermit
Unonkala obizwa ngokuba yirherm crab naye ubizwa ngokuba ngunonkala wamajoni. Yi-crustacean eyeyosapho lwe-decapod kwaye kukho malunga neentlobo ezingama-500 zala nonkala ehlabathini jikelele. Nangona inkoliso yoonkhekhwezikholwayo bangamanzi, kukho nezinye iintlobo zomhlaba.
Sebenzisa amaqokobhe enkumba okanye enye imollusk ukugubungela isisu, njengoko ingenalo iqokobhe njengamanye amaqokobhe. Ithambile kwaye ke isesichengeni sokuhlaselwa ngamarhamncwa. Kunokuthiwa luhlobo lokutya, kodwa alutyi sidumbu sezinye izilwanyana, kodwa lisebenzisa iqokobhe ukuhlala kulo.
Ungahlala ukubona uhamba ngaselwandle, ngelixa usitya kwaye ukhula. Ukuba kukho nayiphi na inkumba efileyo apha endleleni, esi silwanyana sishiya iqokobhe laso elidala ukuze siziqhelanise neqokobhe elitsha elingenanto. Oku kwenzeka kuphela ukuba iqokobhe elitsha linomthamo omkhulu wokukunika intuthuzelo kunale yakudala. Ukuba ufumana iqokobhe elincinci, akazukuyibamba. Le nto yokuziqhelanisa nendalo iyamthintela ekuguqukeni nasekufumaneni iqokobhe lakhe. Ngokuhlala ukhetha iqokobhe lesinye isilwanyana, awuphuhlisi iifom zokuthintela ngakumbi ezisebenza njengokukhusela, njengoko izilwanyana ezahlukeneyo zohlobo olunye ziye zavela.
Nangona inzululwazi ingakhange ikungqinisise oko, unokujonga indlela ozalwa ngayo unonkala xa ebona inkumba ephilayo kwaye eyazi ukuba iqokobhe layo lingalikhaya. Oku kuqinisekisiwe kuba kuvavanywe amaqela oononkala ngasemva kwemollusk belindele ukuba ife.
Ihlala bomvu okanye mdaka ngombala. Oku kuxhomekeke kubume bendawo abahlala kuyo kunye nokuba indala kangakanani inkala. Eyona nto iqhelekileyo kukuba ziyahluka phakathi kwemibala yeorenji, ebomvu ebomvu, nmdaka ngombala, njl. Inemilenze eli-10, phakathi kwayo ezimbini zokuqala ezimile, eziyimpazamo. Ilungelo likhulu kunasekhohlo kwaye zombini zinendawo erhabaxa kunye nengca ebunjiweyo.
Iibini ezi-4 ezilandelayo zemilenze zisetyenziselwa ukuhamba kwaye ezinye zibambelele kwaye zihlale ngaphakathi kweqokobhe. Inamacandelo amabini afana kakhulu nee-eriyali ezisebenzisayo ukukwazi ukuziva yonke into ejikeleze yona nokwenza imeko-bume.
Umphambili kanonkala yinto esinokuyibona ngaphandle kwegobolondo. Eli candelo ligutyungelwe ngumhlaba oqinileyo, ngelixa isisu salo kunye nenxalenye yangasemva ithambile. Esi sizathu sokuba sikwazi ukubona unonkala ujija isisu sawo ukuze ungene kwigobolondo. Nantsi indlela oyisebenzisa ngayo ukhuseleko. Xa iziva isengozini, isebenzisa imilenze neentsimbi zayo ukuze umhlaseli angakwazi ukungena kwiqokobhe lakhe aze ahlasele elona candelo libuthathaka.
Ukutya kwenkalaka yeHermit kunye nendawo yokuhlala
Unonkala angatya nantoni na. Abantu abaninzi balubiza ngokuba luphawu lolwandle kuba banokutya phantse nantoni na. Ukutya kwayo kune-omnivorous kwaye kubandakanya iimbaza, iminenke, iintshulube, imibungu, izityalo, njl. Kananjalo, njengobunjani bayo ukuthatha amathuba oonokrwece abafileyo, inokutya izilwanyana ezifileyo. Njengakwi Unonkala oluhlaza Iyakwazi ukufumana ukutya kwayo ngokucoca onke amasuntswana e-organic anokusebenza njengokutya.
Ngokubhekisele kwindawo yokuhlala kunye nendawo yokuhanjiswa, sifumana into ebanzi kakhulu. Kwaye ingafumaneka kuwo wonke umhlaba. Kuba inamanzi kwaye imeko yasemanzini engaselunxwemeni, inokuhlala kwezona ndawo zinzulu zolwandle nakwiingqaqa, kwiindawo ezinamatye eselunxwemeni nakwisanti eselunxwemeni lolwandle. Ngokwesiqhelo, inzulu eye yabonwa imalunga neemitha ezili-140.
Ukuba basemhlabeni, bakhetha ukuhlala befihlakele ematyeni, kodwa kufuneka babekufuphi kakhulu nonxweme ukuze babe namanzi. Ngokumalunga nokuhanjiswa kwayo, kunokuthiwa kukhetha ezo ndawo zinemozulu yetropiki. Ihlala ihlala ngobuninzi kumazwe aseMelika naseYurophu. Kulula ukubona enye yezi nkala ukuba usuka eAlaska usiya eMexico okanye usuka eGuatemala uye eChile.
Ukuzaliswa kononkala lweHermit
Ezi zilwanyana zivelisa i-oviparous. Oko kukuthi, bavelisa kwakhona kumaqanda. Abafazi bahlala bezala kabini ngonyaka. Iziphumo zazo eziphambili ziphakathi kweenyanga zikaJanuwari noFebruwari, apho kuhlala khona abantu abahlala yedwa elunxwemeni lolwandle. Abo bahlala enzonzobileni kuye kwathiwa iimazi ziyakwazi ukuthwala amaqanda esibelekweni kude kube ngunyaka.
Nje ukuba bakhuphele, ngabafazi abathwala amaqanda phantsi kwesisu iinyanga ezininzi. Emva koko uyikhuphela elwandle kwaye kulapho izibungu zikhona, kunye nendlela yokuphila ye-pelagic, hlala ulahlekile iiveki ezimbalwa. Nje ukuba baqandusele, bavela kwiindawo ezibizwa ngokuba zi-zoes eziyinxalenye yeplankton.
Njengoko bekhula, baphalaza ulusu rhoqo. Kude kube unee-eriyali ezi-4 kunye ne-2 clamp kulapho uya kuthi ube nakho ukufumana iqokobhe elikuvumela ukuba ukhusele umzimba wakho uphela. Ndiyabulela kolu khuselo ngoku banokushiya ulwandle kwaye baqale ukuphuhlisa ikepusi yabantu abadala.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi luyakunceda ufunde okungakumbi malunga nononkala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Unonkala lweHermit